Lehilahy iray, efa-polo taona, ny tsara tarehy, mitady tovovavy ho akaiky ny fivoriana.
Bandy mitady ny tovovavy ‘ny Tanjon’ ny Mampiaraka ny Finamanana sy ny fifandraisana Faha-valo ambin’ny folo hihaona mahaliana, manan-tsaina, mendrika, ary lehilahy nanan-karena-ny tompony, noho ny efa-polo taona, fa ny tsara mahafinaritra, amim-panajana, feno mahaliana ny zava-mitranga, ny fifandraisana mirindra.
Izay te-hihaona aminao
Ny fialam-boly no Tanjona ny Mampiaraka ny Finamanana sy ny fifandraisana Taona, amin’ny efapolo — Ankizivavy iray, roa-polo amby enin-taona, mitady lehilahy ho an’ny famoronana ny fianakaviana.
Zazavavy mitady olona izaho no tena mavitrika, amim-pifaliana. Izaho tia mandehandeha, ny fizahantany, ny natiora, ny voninkazo, ny saha, ny trano, ny jono, ny gitara, afon-dasy ao amin’ny trano-lay. Fitiavana sy mahalala ny fomba fahandro, manendasa. Faly hikarakara ny trano, raiki-pitia, afaka manjaitra, tafiditra ao anaty trano sy zaridaina voninkazo tsy mitsaha-mitombo, amin’ny famoronana ny an-trano.
Ny fialam-boly no Tanjona ny Mampiaraka — ny Fitiavana sy ny fifandraisana Taona roa amby telo-polo izaho no tena mavitrika, amim-pifaliana. Izaho tia mandehandeha, ny fizahantany, ny natiora, ny voninkazo, ny saha, ny trano, ny jono, ny gitara, afon-dasy ao amin’ny trano-lay. Fitiavana sy mahalala ny fomba fahandro, manendasa. Faly hikarakara ny trano, raiki-pitia, afaka manjaitra, tafiditra ao anaty trano sy zaridaina voninkazo tsy mitsaha-mitombo, amin’ny famoronana ny an-trano.
Ny fialam-boly no Tanjona ny Mampiaraka — ny Fitiavana sy ny fifandraisana Faha-telo amby telo-polo Hispanika, dimy amby efa-polo taona, manam-pahaizana, manan-tsaina, tsy misy ny olana ara-toekarena, tsy manambady, tsy misy ankizy, mitady vehivavy ny taona maro ho an’ny fifandraisana matotra. Manasa ny vehivavy ao amin’ny fialan-tsasatra, ny fandaniana mandray mihoatra.
Bandy mitady tovovavy mitady ny Fitiavana sy ny fifandraisana dia hihaona amin’ny lehilahy avy amin’ny efa-polo amby enim-polo taona, ho an’ny fifandraisana. Momba ny Breziliana, dia dimam-polo amby iray taona, nisara-bady ary efa roa ny olon-dehibe ny ankizy. Misy fahazaran-dratsy, dia hitarika fomba fiaina mavitrika, tiako vaovao ny olom-pantatra sy ny dia lavitra.
Ianao mitady azo antoka ny olona, izay ihany koa, tahaka ahy, reraka ny fanirery.
Ny fialam-boly no Tanjona ny Mampiaraka — ny Fitiavana sy ny fifandraisana Taona, efa-polo avy ny vehivavy Breziliana te-hihaona amin’ny teny espaniola ny olona (amin’ny fahalalana ny Breziliana teny) ho an’ny fifandraisana matotra.
Ny fialam-boly no Tanjona ny Mampiaraka — ny Fitiavana sy ny fifandraisana Ny taona, dia avy ny Espaniola, polo amby efa-polo telo taona, tsy manambady, tsy misy ankizy, tsy misy ny olana ara-toekarena, mba hihaona manintona sy slim zazavavy ho an’ny fanambadiana.
Miandry ny sary an-tariby
Manasa anareo aho mba hahita ny ao an-tanàna.
Mialoha ny fivoriana
Izay te-hihaona aminao. Bandy mitady tovovavy mitady ny Fitiavana sy ny fifandraisana hi rehetra. Izaho no tena irery, inona moa ve ianao te-hahita ny olona.
Ny fialam-boly no Tanjona ny Mampiaraka — ny Fitiavana sy ny fifandraisana Faha-enina amby telopolo mitady lehilahy iray mirindra tsara ny fifandraisana eo amin’ny fototry ny nizara ny soatoavina sy ny tombontsoa, ary angamba ny hitaiza ny fianakaviana iray. Lava, manifinify, manintona. Toerana tena zavatra-psikolojia, coaching, coaching, nanoratra. Hitarika fomba fiaina ara-pahasalamana mirotsaka amin’ny fivoaran’ny tena manokana I. izay te-hihaona aminao. Ny fialam-boly no Tanjona ny Mampiaraka — ny Fitiavana sy ny fifandraisana Taona efa-polo Roa telo amby telo-polo taona maro, dia mitady ny mpivady iray amin’ny roa-polo amby telo-polo amby valo taona dia nitoetra tany Barcelona hatramin’ny enina ambin’ny folo Oct soraty ao Whatsapp, Viber na izay te-hihaona. Ny fialam-boly no Tanjona ny Mampiaraka — ny Fitiavana sy ny fifandraisana Taona, avy dimy amby roa — polo na inona Na inona ny olana mety ho voavaha amin’ny alalan’ny herin’ny maizina, na dia toa hita fa ny zavatra rehetra dia efa ho very. Rehefa miresaka momba ny raharaham-barotra, ianao dia tsy hahomby na inona na inona ezaka. ISIKA DIA HANAO NY FIVAROTANA FIFANARAHANA NY FANAHY.
← Tadiavo ny ankizivavy iray ho an'ny fifandraisana matotra sy ny fanambadiana
Ny amin'ny Chat Roulette lahatsary amin'ny chat Breziliana →